QM oo ka hadashay Abaaraha ka jira Soomaaliya
Qaramada Midoobey ayaa ka codsatay deeqbixiyeyaasha caalamka in sare loo qaado gargaarka Bani’aadamnimada ee la siiyo dadka kunool Geeska Afrika , madam ay haystaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin Abaaro baahsan oo soo wajahay.
Xiriiriyaha Bani’aadamnimada ee Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Peter de Clercq ayaa ka sheegay Nairobi Jimcihii in xaalada adag oo dhanka nolasha ah ay haysto dadka kunool Soomaaliya , islamarkaana ay haboon tahay in wax laga qabto arintaasi , madam dadkaasi ay u nugul yihiin in ay dhintaan.
“Waa Waqti looga baahan yahay deeqbixiyeyaasha caalamka in ay bixiyaan dhaqaalo dheeraad ah , si aan wax uga qabano xaalada sii xumaanaysa ee Soomaaliya, abaaro daran ayaa ku dhuftay inta badan Soomaaliya , waana arin loo baahan yahay in lagu bixiyo dhaqaalo badan marka waxaan codsanaynaa in nala taageero” sidaas waxaa yiri Peter de Clercq.
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in kumanaan qof ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan abaaraha ka jira Soomaaliya.
Sidoo kale Qaramada Midoobey ayaa xustay in dhaqaalihii caalamku ay ugu tala galeen in ay ku caawiyaan dadka kunool Soomaaliya aysan wali bixin cadadkii loo baahnaa.
Hadalka kasoo baxay Qaramada Midoobey ayaa kusoo beegmaya xilli abaaro sameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ay ka taagan yihiin qeybo badan oo ka mid ah Soomaaliya.